လူတစ်ယောက်ကို ဘာ့ကြောင့် ချစ်မိကြသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၂)ချက် - Lifestyle Myanmar
တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ မေတ္တာမျှခြင်းက သင့်ကို ပျော်ရွှင်မှု ခံစားရစေပါတယ်။ အချစ်က သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကို မြန်စေတဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး စိတ်ခံစားမှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက သင့်ကို အထူးပုဂ္ဂိုလ်ဆီ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ဘာ့ကြောင့်ချစ်မိသွားလဲဆိုတာ သင်တွေးမိအောင် မှော်ဆန်လွန်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုအရာက သူ့ကို ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် သိမ်းသွင်းနိုင်ဖို့ ခရီးရှည်ကြီးအထိ မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကို ဘယ်အရာက မောင်းနှင်တာလဲ? ဘာက သင့်ကို ချစ်မိသွားစေတာလဲ? ဆက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။ လူတစ်ယောက်ကို ဘာကြောင့်ချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။
ကျွန်မတို့ ချစ်ကြ၊ ကြိုက်မိကြတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်မတို့ဟာ လူတစ်ယောက်ကို ဘာ့ကြောင့်ချစ်မိတာလဲဆိုတာ မသိကြပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်တွေများစွာ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခု၊ နှစ်ခုလောက်သာ မဟုတ်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားစေရတဲ့ အချက်တစ်ခုက ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတယ်ထင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုကြောင့် သဟဇာတ ဖြစ်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သင်တို့နှစ်ယောက် မျှဝေတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေ၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ တူညီပါက ၊ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်အများစုနဲ့ ကိုက်ညီပါက သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ သဟဇာတဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကို နီးကပ်လာစေပါတယ်၊
ဆွဲဆောင်မှုက အထူးသဖြင့် ကနဦးအဆင့်တွေမှာ ချစ်မိကြိုက်မိသွားကြတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဆွဲဆောင်မှုက ရုပ်ရည်သာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့သောသူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မျှဝေထားတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ၊ အဆင့်အတန်း (သို့) ဉာဏ်ရည်တွေကိုလည်း စွဲမက်လာနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဆွဲဆောင်မှုက ရင်းရင်းနှီးနှီးနေမှုရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်လာရင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို အရူးအမှုးစွဲလမ်းမှုလို့ သတ်မှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သင်ဟာ ဆွဲဆောင်ခံရသော်လည်း ထိုသူနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တကယ်ပိုမသိရပါဘူး။
သင်နဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်ဟာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ချိတ်ဆက်မိတဲ့အခါ ချစ်မိဖို့ပြင် အခြားရွေးချယ်စရာ မရှိပါဘူး၊ လူသားတွေအနေနဲ့ ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်ဘဝကို ပြည့်စုံစေတဲ့ connection တစ်ခု (သို့) နှောင်ကြိုးကိုရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ နက်ရှိုင်းစွာ ချိတ်ဆက်မိတဲ့အခါ ထိုခံစားချက်က ကျေနပ်စရာကောင်းလာပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီခံစားချက်ကို ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံရှည်ကြီးတစ်ခု ဆက်ဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ ဒါက ထူးဆန်းသော်လည်း ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုက ကျွန်မတို့ကို ချစ်မြတ်နိုးစေမိပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်တွေက ဆွဲဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ကြားဖူးမှာပါ။ သို့သော် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ စိတ်တူကိုယ်တူတွေဖြစ်လို့ (သို့) တူညီမှုတွေ မျှဝေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးက ခရီးသွားရတာ၊ စာဖတ်ရတာကို နှစ်သက်တယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက စိတ်ချင်းဆက်နေကြတယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ရင်းနှီးသော ချိတ်ဆက်မှုနှင့် နီးကပ်မှုကို တည်ဆောက်ပေးပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
၅။ ကိုယ့်မိဘနဲ့ ဆင်လို့
ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်မိဘတွေကို ကြည့်ရင်းနဲ့ ကြီးပြင်းလာကြရတာပါ။ တစ်ချို့တွေက ကိုယ့်မိဘရဲ့ စရိုက်တွေ၊ ကာရိုက်တာတွေကို စိတ်ထဲမှာ စွဲနေပြီး ဒီစရိုက်မျိုးဆင်တဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ရှာလေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်မှာ ထိုကဲ့သို့သော အလားတူအင်္ဂါရပ်တွေ၊ အမူအကျင့်တွေကို ရှာတွေ့ခြင်းက သူတို့ဆီကို ဦးတည်သွားစေပြီး သင့်အား relationship ကျေနပ်မှုကို ပေးပါတယ်။ ဒါက သင့်အား ချစ်မိစေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ communication ကောင်းလို့
” ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲ အဆင်ပြေလား?” , ” ငါနင့်ကို အားပေးတယ်”,” မင်းဘယ်သူပဲဖြစ်နေနေ မင်းကိုချစ်တယ်”
လူနှစ်ယောက်က မတူနေရင်တောင် communication ရှိခြင်းက သူတို့ကို ချိတ်ဆက်ဖို့ ကြိုးတစ်ချောင်း ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သော စကားလက်ဆုံပြောခြင်းက စွမ်းအင်ကောင်းဖလှယ်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားပြောနိုင်တဲ့အခါ ကောင်းတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်ကို အကဲဖြတ်မပေးဘဲ နားထောင်ပေးစေလိုပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီလိုလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင် သင် သူ့ကို ချစ်မိသွားပါလိမ့်မယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာက သင့်ကို ပြည့်စုံစေပါတယ်။ လက်တွဲဖော်ရဲ့ အဖော်ပြုခြင်းကို တောင့်တတယ်။ သူတို့အနားမှာ ရှိနေတဲ့အခါ သင်ပျော်ရွင်တယ်။ သူရှိနေရင် သင့်ဘဝမှာ အခြားအရာတစ်ခု (သို့) အခြားဘယ်သူ့ကိုမှ မလိုချင်တော့တဲ့ ခံစားချက်က သင့်ကို ချစ်မြတ်နိုးမိစေပါတယ်။
သူက သင့်ကိုရယ်မောစေတယ်၊ သူနဲ့နေတဲ့အချိန်ဆို စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင် သေချာပါတယ်။ သင်သူ့ကိုချစ်မိသွားပါလိမ့်မယ်။ ဟာသအမြင်ရှိတဲ့ လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ရထားခြင်းက သင့်အား စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေ၊ ခံစားမှုကောင်းစေပြီး သင့်ဘဝကို ပိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ ဒါက ဘဝလက်တွဲဖော်ရွေးတဲ့အခါ လူတွေအများစုကြည့်လေ့ရှိကြတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ခံစားချက်နှင့် အခြားလူတစ်ယောက်က သင့်ကိုတစ်ယောက်တည်း မထားခဲ့ဘူးလို့ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က ရိုးရှင်းပေမယ့်လည်း သင့်နှလုံးသားကို အရည်ပျော်သွားစေနိုင်တဲ့ အရေးပါသော အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ဖို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရှိစေနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ Emotional intelligence ရှိလို့
ဒါက Relationship တစ်ခုကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းထားပေးနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်တွဲဖော်တွေကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုသိကျွမ်းစေပါတယ်။ EQ ဟာ လူနှစ်ယောက်ကြား ရင်းနှီးမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ပိုခိုင်မာစေတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အများစုမှာ ကတိတည်မှု၊ ကြင်နာမှု၊ ဂရုစိုက်မှုကို ရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအယူအဆတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒီအရာတွေ အားလုံးရှိပြီး သင့်အားကောင်းကောင်းနားလည်ပေးတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သင်တွေ့တဲ့အခါ သူတို့အပေါ်မှာ ရင်ခုန်စရာ ခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါက မေတ္တာမျှခြင်းမှာ လျှော့တွက်ထားတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောအခြေအနေတွေမှာ အချစ်က သီးသန့်ဆန်ခြင်း၊ အထီးကျန်ဆန်ခြင်းအတွက် အဖြေတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ သင်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေချိန်မှာ စကားလာပြောယုံနဲ့တောင် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို ပျော်ရွင်စေမယ်ဆိုရင် သင့်နှလုံးသားလေး အရည်ပျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က သင့်ရဲ့ဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ ဘဝရဲ့လစ်ဟာမှုကို ဖြည့်ပေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့စိတ်ရှည်မှုနဲ့ စာနာမှုက သင့်ကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်မှာထားတဲ့ သူ့ရဲ့လေးစားမှုနဲ့ နားလည်ပေးမှုက အထင်ကြီးစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဘဝမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သင်တွေ့တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ရင်ခုန်စရာ ဆက်ဆံရေးအတွက် တခြားဘာမှ တောင်းဆိုမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မျှတမှုက သင့်ရဲ့အချစ်ဘဝကို ပြည့်စုံ၊ ခိုင်မြဲစေပြီး တာရှည်ခံစေပါတယ်။ ဒါက တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ချစ်မိသွားစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။